I-Jemez Canyon Buka i-Retreat - I-Airbnb
I-Jemez Canyon Buka i-Retreat
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Debi
U-Debi Ungumbungazi ovelele
I-Jemez Canyon Buka i-Retreat "I-Starry Skies, Ukubuka Kwe-Canyon & Nokuhamba Ngokulula Ukuya Esigodini!
Woza Ujabulele Ukuthula, Ukuzola, Nobuhle Obunwetshiwe be-Jemez Canyon View Retreat enhliziyweni Yedolobhana lase-Jemez Springs.
Indlu yeJemez Canyon View Retreat ingamamitha-skwele ayi-1300. Leli khaya lokulala elingu-1/igumbi lokugezela eli-1 ligcwele izinto eziningi ezengeziwe, okuhlanganisa nemisebenzi eminingi emihle yobuciko yasendaweni nakwezinye izingxenye zezwe, okuhlanganisa nokuqoshwa kokhuni okwenziwe ngesandla.
Ikhishi elivulekile lokukhanya kwesibhakabhaka kanye nokubukwa kwefasitela ngaphandle kwe-mesa, futhi inebha yasekhishini, egcwele izitulo zenkomishi yasekuseni yekhofi noma ukuhlela uhambo losuku. Ikhishi lihlome ngokuphelele ngezitsha ezinhle zokuphakelwa, i-flatware nakho konke okudingwa ngumpheki. I-pantry inokukhethwa okukhulu kwekhofi namatiye, anokhilimu noshukela kanye nama-condiments amaningi nezimpahla zephepha (ukugoqa ngepulasitiki, i-foil, izikhwama zokukhiya u-zip, izikhwama zikadoti, njll.)
Ikhishi linetafula lesitayela sezwe nezihlalo ezinokubukwa okubheka phezulu ezindongeni ze-canyon nase-Virgin Mesa.
Kukhona igumbi lokuwasha elinewasha nelomisa ekhishini (eliphelele ngemikhiqizo yokuwasha). Indlu ifakwe i-air-conditioning yendlu ephelele kanye nokufudumeza ukuze uhlale upholile ezinyangeni ezishisayo kanye nokufudumala okuthosiwe ebusika.
Igumbi lokulala elikhulu linombhede weKing, i-walk in closet, kanye nebhavu layo langasese elinamasinki akabili, kanye nemibono emihle yesigodi esibheke eningizimu.
Igumbi lokuhlala linendawo yokuhlala ethokomele, enobuciko ene-Smart TV engu-49” (eneziteshi eziningi zamamuvi). Futhi ukubukwa okubheke empumalanga nasenyakatho ngaphandle ku-Cat Mesa.
Jabulela ukubuka ukuphuma kwelanga, ukushona kwelanga, nokubuka izinkanyezi okuhle kusuka kuzo zombili izitezi zangaphambili nangemuva.
4.98 · 105 okushiwo abanye
I-Jemez Springs iziqhayisa ngemithombo eminingi eshisayo ezintabeni eduze kwayo nemizila yokuhamba izintaba, kanye ne-Village Bath House, i-Giggling Springs kanye namachibi okucwila e-Bohdi Zen Centre. Kunezindawo eziningi zemibukiso yezobuciko nezitolo zezipho endaweni, kanye neSitolo Sekhofi Esiyi-Highway 4, I-Los Ojos Bar and Grill, I-Stage Stop Restaurant kanye ne-Fire House Brewery entsha. Kukhona futhi indawo emnandi ye-Nomad Mountain Pizza eLa Cueva. Kunamathuba amaningi okuzijabulisa okuhle kakhulu okubukhoma kuzo zombili izindawo zokudlela eziphambili, kanye nokuvulwa kobuciko okuvamile kumagalari nemicimbi ekhethekile ngamaholide edolobhaneni (www.jemezsprings.org)
UDebi Ungumbungazi ovelele